Shanta Xidig Ayaa Si Toos Ah Ugu Tartamaya Kabta Dahabka Ah Ee Gool Dhalinta Premier league-Midkee Hanan Doona? - Gool24.Net
Shanta Xidig Ayaa Si Toos Ah Ugu Tartamaya Kabta Dahabka Ah Ee Gool Dhalinta Premier league-Midkee Hanan Doona?
Tartanka kabta dahabka ah ee gool dhalinta Premier League ayaa xili ciyaareedkan u muuqda mid xiiso gaar ah yeelanaya kadib markii ay xidigo badani muujiyeen in uu noqon karo xili ciyaareedkii ugu goolasha badnaa.
Afar kulan oo kaliya ayaa ilaa hadda laga soo ciyaaray horyaalka Premier league balse waxaa la saadaalinayaa in ay jiraan ilaa shan xidig oo si dhab ah ugu tartami doona kabta dahabka ah ee Golden Boot.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shanta ciyaartoy ee loo arko in ay xili ciyaareedkan ku guulaysan doonaan kabta dahabka ah ee gool dhalinta Premier League.
Waxaa naga xusuusin ah in sharciga Premier League uu ogol yahay in laba ciyaartoy iyo wax ka badani ay kabta dahabka ah kuwada guulaysan karaan haddii ay isku goolal ku dhamaystaan.
Xili ciyaareedkii la soo dhaafay waxaa saddex kabood oo dahab ah la kala gudoonsiiyay Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Aubameyang, waxaana markale suurtogal noqon karta in ay xidigo dhawr ahi kuwada guulaysan karaan Golden Bootka.
Halkan kaga bogo xidigaha sida tooska ah loogu saadaalinayo kabta dahabka ah ee gool dhalinta Premier League ee xili ciyaareedkan.
5- Raheem Sterling-Man City:
Waxa uu haddaba soo dhaliyay 5 gool kadib afar kulan oo uu kooxdiisa Man City u ciyaaray, wuxuuna doonayaa in uu markii ugu horaysay ku guulaysto kabta dahabka ah ee gool dhalinta Premier league.
Raheem Sterling waxa uu xili ciyareedkan ku bilawday qaab ciyaareed cajiib ah wuxuuna wali wax ka baranayaa Guardiola oo ka dhigay dhamaystire fiican oo wax badan laga filan karo.
4-Harry Kane- Tottenham:
Waxa uu hore u ahaa mid kaalinta kowaad ee gool dhalinta Premier league ku dhamaysanayay ilaa intii uu Mohamed Salah kala waregayay, laakiin Harry Kane ayaa doonaya in uu markale ku guulaysto Golden Bootka.
Ilaa hadda waxa uu Harry Kane soo dhaliyay 3 gool kadib afartii kulan ee ilaa hadda la soo ciyaaray, wuxuuna ka mid yahay xidigaha loo saadaalinayo ku guulaysiga kabta dahabka ah ee xili ciyaareedkan.
Aubameyang waa mid ka mid ah saddexda xidig ee difaacanaya kabta dahabka ah ee gool dhalinta Premier league kadib markii uu xili ciyaareedkii la soo dhaafay uu 22 gool dhaliyay isla markaana uu markii ugu horaysay kabta dahabka ah ee Premier League uu kula guulaystay Salah iyo Mane.
Aubameyang waxa uu haddaba soo dhaliyay 3 gool kadib markii uu soo ciyaaray afartii kulan ee Premier league waxaana ka mid ahaa goolkii uu barbaraha ugu keenay kooxdiisa kulankii North London Derby ee Tottenham.
Aubameyang waxa uu si toos ah uga mid yahay xidigaha ugu cad cad ee markale ku guulaysan kara kabta dahabka ah ee gool dhalinta Premier League.
Riix 2 aad si u sii akhrisato.